Gmail bụ maka ọtụtụ ndị ọrụ akara aka maka ịnata na izipu ozi ịntanetị mana, kemgbe ọtụtụ afọ, ọ gbanweelarị eserese ya iji jikọta ọtụtụ ọrụ Google, na-aghọ ngwa ngwa nke ikpo okwu Google. . Interface ahụ abụrụla ihe siri ike ma sie ike iji ọtụtụ ndị ọrụ novice, ndị na-achọta onwe ha ozi buru ibu na ọrụ na-abaghị uru na ihuenyo.
Ọ bụrụ n’ị chere na interface Gmail dị oke mgbagwoju anya ma gbachapụ agbachapụ, ị biala ntụzi aka - anyị ga-egosi gị ebe a otu esi ahazi Gmail site na iji ngwa kacha mma, yabụ ị nwere ike ịnweta ọrụ email dị ọcha, na-enweghị ọtụtụ fụlị eserese na ọrụ ndị ọzọ na akụkụ aka ekpe. Na ngwụcha ọgụgụ a, anyị ga-enwe ike ijikwa Gmail n’ụzọ dị mfe na ozugbo, gụọ ozi ịntanetị anyị na PC wee zaa ozi niile ọsọ ọsọ.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Mgbatị iji melite Gmail na Chrome na Firefox
Etu esi hazie Gmail
Nhazi Gmail dị ezigbo mfe, ebe ọrụ email nke Google na-enye ngwa ọrụ niile iji mee ka eserese eserese nke saịtị ahụ rụọ ọrụ nkeonwe. Ọtụtụ ntọala na-ezo ma ya mere o siri ike ịhụMana site n'iji nlezianya gụọ ahịrị ndị a chọrọ n'okpuru, anyị nwere ike ịhazi Gmail ka ọ dị ngwa iji, ọkachasị n'ebe ọrụ.
Gbanyụọ Meet na Hangouts
Ọrụ ndị ọzọ agbakwunyere na mbụ anyị nwere ike wepu ozugbo n’akụkụ aka ekpe bụ Meet na Hangouts, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ebughị n’obi iji ha. Iji gaa n'ihu, ka anyị gaa na weebụsaịtị Gmail, banye na akaụntụ Google anyị, pịa akara ngosi gia n'akụkụ aka nri, pịa Lee ntọala niile n'ikpeazụ gaa na kaadị ahụ Nkata na nzukọ.
Na ibe ga-apụta, anyị na-etinye akara akara na Hangouts nwere nkwarụ mi Zoo ngalaba Nzuko na menu menu, anyị pịa Chekwaa mgbanwe. Ugbu a, n'ikpeazụ, Gmail ga-elekọta naanị email, na-enweghị ọrụ Google ndị ọzọ na-agaghị eji.
Dezie mkpado na edemede
Nhazi ọzọ anyị nwere ike itinye na-ezo aka na aha mmado pụtara na akụkụ aka ekpe nke Gmail na edemede nke ozi ịntanetị na-agbakwunye; ọ bụghị ihe niile a kpọtụrụ aha na-enyere aka na mgbe ụfọdụ ọbụna na-enweghị isi. Iji jikwaa mkpado na edemede, ka anyị laghachi na menu Lee ntọala niile (dika ahuru n’isi mbu) ma mepee taabụ Tags.
Site na ihuenyo a, anyị nwere ike iwepụ ihe ndị anyị na-enweghị ekele site na ịpị mmewere zoo; ma ọ bụrụ na kama na anyị chọrọ ụfọdụ mmewere na-ahụ anya, anyị nwere ike họrọ mmewere ngosi ha abụọ na-ahọrọ olu ahụ gosi ma obughi ịgụ (naanị maka ụfọdụ mkpado), nke mere na naanị na mkpado anyị chọrọ bụ otu pịa. Aha mmado agaghị akwụsị kpamkpam, a ga-ezo ha naanị: iji hụ ha naanị pịa More menu na aka ekpe.
Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, anyị chọrọ ịhazi edemede ndị na-apụta na ibe obibi Gmail (n'akụkụ edemede ahụ Isi, nke na - enweghị ike ihichapụ), mepee taabụ Igbe mbata site na menu Lee ntọala niile.
Anyị nwere ike ihichapụ ihe niile (ma gụọ ozi ịntanetị naanị na otu Isi) ma ọ bụ hapụ naanị otu ma ọ bụ abụọ edemede, ịnwe ihe niile na-achịkwa ma zere ịghasa ọdịnaya nke ozi ịntanetị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta akara ngosi aha ọhụụ ma gosipụta ha na sidebar, ihe niile anyị ga - eme bụ ịgbasa akụkụ aka ekpe (site na ịpị akara ngosi hamburger na aka ekpe aka ekpe), pịa Ndị ọzọ, pịgharịa na ndepụta ahụ wee pịa pịa Mepụta mkpado ọhụrụ. Mgbe imepụta akara anyị, pịa Jikwaa Labels (dị n'otu mmanya) wee pịa ngosi na-esote aha ahọpụtara maka mkpado ọhụrụ ahụ, yabụ ọ nwere ike ịbụ otu pịapụ ozugbo.
Nịm isiokwu igbe akwụkwọ ozi na ụdị na Gmail
Ọ bụrụ na anyị hụrụ n'anya ịhazi ebe ọrụ anyị, enwere ike ịhazi Gmail na isiokwu ole na ole na ụdị dị iche iche, ka ọ bụrụ ngwa mara mma ma dịkwa mfe iji na ntanetị ole na ole. Iji gbanwee isiokwu na ụdị igbe ahụ, ihe niile anyị ga-eme bụ pịa akara ngosi gia na aka nri elu wee pịgharịa na windo na-efu, n'ihi ya ị nwere ike ịhọrọ ụdị eserese ahụ ozugbo.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịkpọrọ anyị gaa na menu. Lee ntọala niile, mepee taabụ Gburugburu wee gaba Tọọ isiokwu, yabụ ị nwere ike ịhọrọ eserese anyị chọrọ itinye.
Wụnye mgbakwunye ọhụrụ
N’akụkụ aka nri nke ebe nrụọrụ weebụ Gmail anyị na - ahụ mmanya dị gịrịgịrị, ebe enwere ndọtị Google nke enwere ike ịbanye na ọrụ ozi. Anyị ga-achọta n'ụzọ doro anya Kalenda Google, Debe ya mi Nke a, ma site na ịpị + akara ngosi anyị nwere ike ịgbakwunye otu n'ime ọtụtụ plugins dakọtara na Gmail.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo dị n'elu, anyị nwere ike ịchọta ngwa mgbakwunye iji jikọta Mbugharị na ọrụ ọgbakọ vidiyo ndị ọzọ, mana mgbakwunye maka igwe ojii, mgbakwunye maka ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na ndị njikwa ederede na ọtụtụ ndị ọzọ.
Gmail dị ka ọ bụ spartan na ọ bụghị nke a na - emezi - dịka egosiri ya na isi ndị bu ụzọ, anyị nwere ike ịgbanwe n'ụzọ ọ bụla nke interface ahụ ma jikwaa aha na edemede nke ozi ịntanetị na-abanye, yana gbanyụọ obere atụmatụ. Eji dị ka Zute na Hangouts.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbalite nzacha akpaka na-adabere na aha njirimara anyị, anyị na-akpọ gị ka ị gụọ nke anyị Ntuziaka Gmail zuru ezu iji bido ma bụrụ Ọkachamara Google Mail.
Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, anyị chọrọ ijikwa ọkwa nke ngwa Gmail na gam akporo ka mma, anyị na-akwado isiokwu anyị Jikwaa amamọkwa Gmail na gam akporo. Anyi ohuru na oru Gmail? Yabụ ka anyị tufue nyocha miri emi Ihe kacha mma Gmail, yabụ ị nwere ike iji Gmail ozugbo bụrụ ọkachamara.